BGR - -6သင်သည်အခမဲ့ 13 သြဂုတ်လဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ကြောင့် iPhone, applications များပေးဆောင် Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ BGR - "6 သင်သည်အခမဲ့ 13 သြဂုတ်လဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ကြောင့် iPhone, applications များပေးဆောင်
အခမဲ့ရောင်းဖို့တို့အခမဲ့ရောင်းခဲ့အကောင်းဆုံး paid က iPhone app များကိုနှင့် iPad များ၏စာရင်းကောင်းသည်, အချို့အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်နေဆဲရှိပါတယ်။ သငျသညျကျိန်းသေကြောင့်လွဲချော်ခဲ့လျှင် နောက်ကျောသွားနှင့် retrieve ။ ပြီးတာနဲ့ပြီးဆုံးကျနော်တို့အင်္ဂါနေ့မှာဝင်ရောက်စီးနင်း၌သင်တို့အဘို့အခြောက်ယောက်သစ်ကိုအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေရှိသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်နေချိန်မှာထိုသူတို့ရ။
ဤဆောင်းပါးသည်၎င်းတို့၏ developer များကန့်အသတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့ရရှိနိုင်ကြပြီကြောင့် iPhone နှင့် iPad များအတွက်ပေးဆောင် apps များဖုံးလွှမ်း။ BGR မဆိုလျှောက်လွှာပြုစုသူနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့အခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုရှည်လျားပြောပြရန်လမ်းမရှိ။ ထိုသို့သောရောင်းအားတစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပါတ်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့အာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာတို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်း၏အချိန်မှာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦး link ကို click နှိပ်ပြီးအစားကမရှိတော့အခမဲ့ "ရ" ၏နောက်လာမည့် app တစ်ခုမှဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းကိုကြည့်ပါလျှင်။ အဆိုပါရောင်းချမှုပြီးစီးခဲ့သည်။ သငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါက, Apple ကသငျသညျကိုအားသွင်းပါလိမ့်မယ်။ တချို့က applications များထပ်တိုး In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RSS feed မှ Subscribe အဖြစ်မကြာမီထိုအစာပမြေားထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်ကျွန်တော်ကိုဖုံးလွှမ်းပျောက်ဆုံးရောင်းအားကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ငွေကြေးစျေးနှုန်းများကို၏စာဝှက်ဖြည်ကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့ခရီးသွားဧည့်ကူညီပေးဖို့အနေနဲ့ဆန်းသစ်အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ရုံစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်စျေးနှုန်းမှာကင်မရာကိုထောက်ပြ, ငါတို့ AI အသင့် screen ၏ထိပ်သို့ကူးပြောင်းစျေးနှုန်းနဲ့စတစ်ကာကပ်။
1 ။ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျမဆိုငွေကြေးသို့စျေးနှုန်းများပြောင်းပေးပါတယ်။
2 ။ အော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်မရှိအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ပါသည်
3 ။ ကိုယ်တိုင်စျေးနှုန်းများပြောင်းလဲတစ်ဦးအမြန်လမ်းပေးပါသည်။
4 ။ စတစ်ကာများဓာတ်ပုံများနှင့်အတူပုံရိပ်တွေသိမ်းဆည်းပါ။
ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ Travelprice သင့်ရဲ့အမြဲတမ်းခရီးသွားအဖော်ဖြစ်လာမျှော်လင့်!
ဒေါင်းလုပ် AR ခရီးသွားစျေးနှုန်း
မိုးလေဝသ - ဂလိုဘယ်ခန့်မှန်းချက်
-6ထူးခြားတဲ့အပြင်အဆင်များ
အဆိုပါရာသီဥတုခဲ့သည် Download - ဂလိုဘယ်ခန့်မှန်းချက်
Knight ဟာမိန်းကလေး - ပဟေဠိဂိမ်း 3
အဆိုပါ Knight ဟာမိန်းကလေးနာမည်ကျော်စီးရီးပုတ်အဆိုပါဖားတစ်ပဟေဠိဂိမ်း (Match-3) ပြုစုသူဖြစ်ပါတယ်။
] Adventures အပြည့်အဝမယ့်ခရီးဖြင့်စတင်အသစ်သောလူများနှင့်အောင်ပွဲတွေ့ဆုံရန်!
စွဲလမ်းဂိမ်း, များစွာသောအဆင့်ဆင့်နှင့်မေတ္တာနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုများအတွက် timeless ရှာပုံတော်!
, Knight ဟာမိန်းကလေးရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကမ္ဘာကြီး Explore က၎င်း၏ကလူတွေ့ဆုံရန်နှင့်သင့်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုထပ်တိုး!
အမျိုးမျိုးသောဆုကြေးငွေများနှင့်ဂိမ်း features တွေ3ဂိမ်း၏ဂန္ဂိမ်းမှာအသစ်တခုကိုကြည့်ယူခွင့်ပြုပါ။
အဆိုပါ Knight ဟာမိန်းကလေးနှင့်အတူစွန့်စားမှုများ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုဖြေဆိုခြင်း!
●ထူးခြားသော Gameplay! ဂိမ်းဂန္ဂိမ်းကွဲပြားဖို့နယူးဆုကြေးငွေနှင့်အသစ် features တွေ 3
●ပိုမို 200 စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်းအဆင့်ဆင့်!
●ကို Magic ကမ္ဘာ့ဖလား: အများအပြားပြောင်းလဲနေသောလူတို့နှင့်အတူတစ်နတ်သမီးပုံပြင်နိုငျငံတျောသညျ
Knight ဟာမိန်းကလေး Download - ပွဲစဉ်ပဟေဠိ 3
အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အလိုလိုသိဂိမ်း။ သင့်ရဲ့တာဝန်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံတဖဲ့နေတဲ့ရောင်စုံတိရစ္ဆာန်အရုပ်ပုံပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းနယူးအံ့သြစရာအချက်အလက်များလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သင်ကသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသူတို့ကိုမျှဝေပေးနိုငျသညျ!
လှပသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူ 80 ထူးခြားတဲ့အဆင့်ဆင့်ကျော်ခုနစျပါးတိုက်ကြီး။ ဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်, သင်ပျော်စရာရှိသည်မဟုတ်သာ, ဒါပေမယ့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာကွဲပြားခြားနားသောသတ္တဝါ၏သင့်အသိပညာပိုမိုနက်ရှိုင်းပါလိမ့်မယ်။
Timer Mode ကိုအတွက်စမ်းသပ်မှုရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုထားပါ။ အားလုံးကြယ်လက်ခံရရှိရန်, သင် 30 စက္ကန့်အတွင်းတာဝန်ဖြည့်စွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးမှာမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သင် play တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဘယ်လိုတွေးမိ။
သင်တစ်ဦးအဆင့်ကိုဖြေရှင်းပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တခုတခုအပေါ်မှာတိရစ္ဆာန်၏ပုံရိပ်ကိုမျှဝေထူးခြားတဲ့လက်ပတ်နာရီကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
- နာရီများအတွက်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်လျှော့ပေါ့ဝါသနာ Find;
Movie Maker Pro ကို - Cardinal မြေ 19659009] MovieSpirit [အင်္ဂလိပ်လို] Download
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည် $ 9,99 ပေးဆောင်
သင့်ကိုယ်ပိုင် microfilm ဖန်တီးလိုပါသလား?
ဒါရိုက်တာ, ထုတ်လုပ်သူ, ကြယ်ပွင့်ကစားသမားဖြစ်လိုပါသလား?
(သက်ရောက်မှု MovieSpirit နှင့်အတူ, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုများ, ဓာတ်ပုံများ, ဂီတ, စာသား, အသံသွင်းနဲ့ရေးခွအဖြစ်, မီဒီယာအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး,, သင့်ဖန်တီးမှုပေါ်မူတည်ပြီးအတူတူသူတို့ကိုတည်းဖြတ်အမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှု add သင့်ကိုယ်ပိုင် microfilm ကိုဖန်တီးရန်မြင်ကွင်းတစ်ခု, etc စာသားကိုကာတွန်း, filter ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ဗွီဒီယိုမိတ်ဆက်စကား, မျက်နှာဖုံးများ,) switching ။
- ဖြတ်, အုပ်စုခွဲ, ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်မာလ်တီမီဒီယာဒြပ်စင်မှုအဆင့်
- (PIP အကျိုးသက်ရောက်မှု၏) multilayer ဗီဒီယိုများ Overlaying, ဗီဒီယိုများ၏အရေအတွက်ကန့်သတ်သည်မဟုတ်
- ဗီဒီယိုဝေမျှဖုံးကွယ်သို့မဟုတ်ပြသနိုင်ဖို့မျက်နှာဖုံးများ (မျက်နှာဖုံးလိုင်း, စတုဂံမျက်နှာဖုံး, စက်ဝိုင်းမျက်နှာဖုံး, မျက်နှာဖုံးနှင့်စာသား layout ကိုမျက်နှာဖုံး) Add
- ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို (ဥပမာကလောင် tool ကို, အ Lasso tool ကို, ထို Smudge Tool ကိုနှင့်ပုံရိပ်ကို matting များအတွက်အသုံးပြုသောစာသား tool အဖြစ်ထုံးစံပုံစံ tools များ)
- Fast Forward, ဗီဒီယိုနှေး-သရုပ်ဆောင်ဓာတ်ပုံများကိုအပ်လုဒ်တင်ခြင်း, ဗွီဒီယို reverse (1 ကြိမ်မှ 16 / 16 နှေးကွေး)
- Rotate ဗီဒီယို 360 ဒီဂရီ
- Blend Mode အကွိမျမြားစှာပုံများ
- အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ကောင်များ၏ Fonts, စာသားတင်းပလိတ်များ, စာသားအရောင်အဆင်း, ရုပ်ပြောင်, မှောင်မိုက်အရိပ်, စာသား features တွေ, etc
- Music နဲ့ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ built-in အခမဲ့သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် iTunes ကိုမှဂီတဖြည့်စွက်ခြင်း, ဗီဒီယိုမှအသံ extracting
- Voice ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်
- Professional ကဗီဒီယိုကိုအချိုး, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အချိန်ဇယား, န့်အသတ်လမ်းကြောင်းအလွှာ
- ရိုးရှင်းသောအလိုအလျောက်ခြေရာခံခြင်း function ကို
- ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ mosaic ထည့်သွင်းခြင်း
] - ထုံးစံနောက်ခံအရောင်
- အလင်းအမှောင်, contrast နဲ့ရွှဲချိန်ညှိ
- သင့်ကိုယ်ပိုင်ကာတွန်း Gif Create
- (သီးခြားစီကိုရောင်း) စိတ်တိုင်းကျပုဂ္ဂလိက Securities မှမိတ်ဆက်ခြင်း
- filter ကိုသက်ရောက်မှုဇင်တချို့က (ပုံကြမ်း, ရုပ်ပြ, ငါးမျက်လုံး, မျက်ကပ်မှန်, အရောင် filter များ, etc)
- ဆိုးကျိုးများ switching မြင်ကွင်းတစ်ခုဇင်
- ဗီဒီယို / ဓာတ်ပုံကိုထိုကဲ့သို့သောစက်ဝိုင်း, နှလုံးသားများနှင့်စိန်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက် configured နှင့်ပင်ထူးခြားသောပုံစံမျိုးစုံစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
- Chroma Key ကိုအရောင်ကိုဖယ်ရှားရန်အစိုင်အခဲနောက်ခံ (ဆိုရင်တော့ Matte အစိမ်းရောင် screen ကိုအပြာမျက်နှာပြင်) အဖြစ်ဗီဒီယိုများ / ဓါတ်ပုံမွမ်းမံရန်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်
- (အရောင် splash) ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်ပါတီမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်, ဗီဒီယို / အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း
- လွတ်လပ်စွာမမှန်ပုံစံမျိုးစုံသို့ဗီဒီယို / ဓာတ်ပုံကိုဖျက်
- ရွှေ့ဖို့ဗီဒီယိုများ / ရုပ်ပုံများ / စာသားအဖို့လှုပ်ရှားမှုမှတ် Add, zoom ကို, ကိုလှည့်နဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးရန်အတူတကွရွှေ့
- ရီးရဲလ်အချိန်ကို Preview, output ကို high-resolution ဗီဒီယိုကို
- က Wi-Fi ကိုမှတဆင့်တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေသွင်းကုန်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာ: ဗီဒီယို, ဓာတ်ပုံများ, ဂီတနှင့်ကာတွန်း GIF ကို
- ထိုသို့သောစသည်တို့ကို Facebook က, iCloud, WeChat, စာတိုက်ပုံးအဖြစ်လူမှုရေးကွန်ရက်များထံသို့တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုများ Save မျှဝေ
MovieSpirit Download - Movie Maker Pro ကို